Wasaaradda Warfaafinta oo soo bandhigtay magacyada xubnaha Guddiyada Doorashada ee laga dacwoodey | Hadalsame Media
Home Wararka Wasaaradda Warfaafinta oo soo bandhigtay magacyada xubnaha Guddiyada Doorashada ee laga dacwoodey
Wasaaradda Warfaafinta oo soo bandhigtay magacyada xubnaha Guddiyada Doorashada ee laga dacwoodey
(Muqdisho) 01 Juun 2021 – Waxaa lasoo bandhigay 67 xubnood oo kamid ah Guddiyada Doorashada Soomaaliya oo ka kooban heer Federaal iyo heer Maamul-goboleed.
Magacyadan cabashada laga qabo ayaa si rasmi ah loogu gudbiyey Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo haatan isagu hoggaamiya arrimaha doorashada.
Xog hoose oo soo gudbiyey Wasiir Xigeenka Warfaafinta Al Cadaala, ayaa sheegaysa in 61 ka mid ah xubnahaasi guud ahaanta ka kooban 67-da xubnood ay dacweeyeen Midowga Musharrixiinta oo arrintan kala hadlay RW Rooble.
Previous articleWARBIXIN: Muslimiinta oo la yaabban Sucuudiga oo masaajiddii la nuxuusinayo muusiggiina la noolaynayo
Next article”Halla musaafuriyo wiilkayga!” – Hooyo Faadumo oo keentay xal yaab oo lagu qaboojinayo xiisadda kooxaha gaangiska Sweden